Akụrụngwa Njikwa Nchekwa onwe / ụgbọ ala ụgbọ ala na-eweta | 1d Akụkụ Akụkụ
Pistin na mgbanaka
Plọg kachasị mma
Mmanụ ụgbọ ala
Oke mma, ọrụ dị elu
Anyị na-elekwasị anya na nyocha& Zụlite ụdị ndị Japan,
Mgbanaka Piston, liner, gasket, gasket zuru ezu, injin,
Mmanụ mmanụ, na-acha uhie uhie na plọg na-enwu.
Ihe dị ka 1D
A na-ahụta ụlọ ọrụ 1d Automation chọta na South China Guang ZOANGE City, Liner, na Assing Assing, na Ngwurugwu, na-enwu ọkụ wdg
Obi dị anyị ụtọ na ọ bụ piston na mgbaaka nke China na-emepụta ihe na-arụ ọrụ na Toyota, Mitsubishi na Issuezi Oem Oizi na ISUzi Oem Owe OEM OEM OEM SITE.
Acciallọ ọrụ 1D usoro atụmatụ elebara anya n'okpuru:
1. nyocha siri ike& Zụlite usoro: hazie ihe karịrị 1600 injin na ahịrị ahịrị, ikike mmepụta 40,000 piston, mgbanaka Piston Piston.
2. Ihe owuwu& Asambodo: Ebube Igwe / Siemens World - Siemens, Japan NIKE NA 170 NKE NIILE, ISLO / TSL694, ISO-2015 nwale.
3. Nchọpụta Kasị Mma& Azụmaahịa dị njikere nke zuru ezu: wuo ntọala ụlọ nkwakọba ụlọ ọrụ na ndịda China Guangzhou obodo iji nweta ozi nzaghachi ngwa ngwa na mkpa ndị ahịa.
4. Azụ ahịa& Ọrụ Ndị Ahịa: Mepee Shoplọ ahịa na Shoplọ Ahịa na Office Office, rụzuo ndị ahịa na "enyemaka ọ bụla na-enye aka" mgbe ọ na-ere ahịa.
Akụkụ Nchekwa 1D bụ akpaaka na-eme ka akụkụ ụgbọ ala na-elekwasị anya na akụkụ ụgbọ ala.
Kacha mma isi kacha mma na-eme ka ọ dị mma
1D kachasị mma nke ụlọ ọrụ dị mma& Asambodo: Ebube Igwe / Siemens World
Ụlọ ọrụ kachasị mma
Otu ọnụahịa 1D na-akwụ ụgwọ - 1D, Japan NITIKE NA 170 zụrụ azụ, CCIP ruru eru, ISO-2015 nwa agbọghọ.1D kacha mma nke ụlọ ọrụ WERETORET, IT CAGET& ngwaahịa dị njikere zuru ezu
Udiri mma na-enwu enwu - 1d akpaaka akụkụ akụkụ CO., LTD.
1D dị elu na-enwu ọkụ - 1d akpaaka akụkụ CO., LTD.
1D kachasị mma nke ụlọ ọrụ gasket zuru oke, ihe owuwu& Asambodo: Ebube Igwe / Siemens World
Ụlọ ọrụ piston kachasị mma
1D kachasị mma nke Piston ụlọ ọrụ, ihe owuwu& Asambodo: Ebube Igwe / Siemens World
Ọnụahịa Piston kacha mma - 1D
1D kachasị mma Piston ọnụahịa - 1D, ihe owuwu& Asambodo: Ebube Igwe / Siemens World
Akụkụ ngalaba autoaka maka akụkụ ụgbọ ala ruo ihe karịrị afọ iri na otu.
Onye na-eweta gasket zuru oke zuru oke
Onye na-ebubata ahịa gasket zuru oke zuru oke.A na-eduzi nnwale nke ngwaahịa ahụ mgbe niile iji hụ na ọ dị mma.
na-atụ aro nke ukwuu maka ya.
Ndị na-emepụta ụda olu ọkachamara
1. Toyota, Honda, Suzuki, Suzuki, Dafa na Missan Party Envide na-acha uhie uhie, nke abụọ chrome na-acha uhie uhie ma ọ bụ ọla, na-acha oji, mgbanaka ọ bụla fesa ya na koodu agba (acha ọbara ọbara, odo na acha anụnụ anụnụ) na-acha anụnụ anụnụ) na ụdị t ma ọ bụ n, mgbanaka ọ bụla, ọbara ọbara, odo na acha anụnụ anụnụ)2. Mitsubishi, Nissan, Toyota, Diesil Engines na mbụ na-acha uhie uhie, etiti na-acha uhie uhie, na-apụta ìhè nke abụọ, mgbanaka mmanụ na-enwu gbaa, mgbanaka mmanụ na-enwu gbaa; Koodu mgbanaka ọ bụla (acha ọbara ọbara, odo na acha anụnụ anụnụ)3. Injin diezi diezi na-agbachi usoro mbụ, akụkụ atọ dị n'akụkụ ma ọ bụ akụkụ anọ dị n'akụkụ ma ọ bụ akụkụ anọ nke mgbanaka na nnukwu usoro mmanụ na-enwe maka oge opupu ihe ubi. Pịnye T ma ọ bụ n, ọ bụla mgbaaka mkpụrụ osisi na-atụ akwụkwọ (acha ọbara ọbara, odo na acha anụnụ anụnụ)
Onye na-ebubata isi nke gasket dị elu - akụkụ 1D akpaaka
Ọrụ nke gasket bụ izu ohi, bụ ihe akara akara dị n'etiti ihe mgbochi cylinder na isi cylinder, na-eji gbochie gas nrụgide dị elu, lubricating mmanụ na ajụkwasị.1d akpaaka akụkụ co., Ltd. Gasket Golet gashetal - 1d akpaaka akụkụ akụkụ CO., LTD.
Intro iji jiri eriri 1d akpaaka can 1d.
Cylinder liner bụ akụkụ cylindrical, etinye na oghere cylinder nke ahụ, ma dozie ya nke isi. Piston na-emegharị mmegharị n'ime oghere n'ime oghere ya na mmiri dị jụụ na mpụga. Ọrụ nke liner na-egbu egbu bụ:1. A na-akpụpụta oghere na-arụ ọrụ cylinder na isi cylinder na piston.2. Igwe ojii cylinder nke injin na cylindrical na-emegharị ma bụrụ onye na-ebute mmegharị nke piston.3. Bufee okpomoku nke Piston na onwe ya na mmiri jụrụ iji mee ka ọ rụọ ọrụ na ọnọdụ okpomọkụ kwesịrị ekwesị.4. A na-ahazi uwe na-adọ aka site na igwe ojii na-acha ọbara ọbara abụọ, nke a meghere ma mechie site na piston iji ghọta nkesa ikuku.1d akpaaka akụkụ co., Ltd. Intro iji jiri eriri 1d akpaaka can 1d.
Kacha mma 4d33 piston Mitsubishi
Alfin Fuse Mitsubishi 4d33 Diesel Ondes On Pinton On Pinson 108mm maka Me013312 Me016896Anyị na-agbaso ụkpụrụ 1D: ngwaahịa dị elu, onye ahịa buru ụzọ. Ngwaahịa anyị nọ na teknụzụ Japan na Taiwan si.4D33 bụ otu n'ime ụdị ndị zuru ebe niile. A na-anabata ogo ngwaahịa anyị. Anyị abụghị hte kacha mma, mana anyị na-enye ihe ịchọrọ.Nabata ịkpọtụrụ anyị wee bido imekọ ihe mbụ anyị.1d akpaaka akụkụ co., Ltd. Kacha mma 4d33 piston Mitsubishi
Ndị na-eme ihe nkiri na-emepụta ọrụ
Valvụ injin1d akpaaka akụkụ co., Ltd. Ndị na-eme ihe nkiri na-emepụta ọrụ
Intro na isi 1d Auto Akụkụ Akụkụ CO., LTD.
Isi ihe1d akpaaka akụkụ co., Ltd. Intro na isi 1d Auto Akụkụ Akụkụ CO., LTD.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ngwaahịa ndị ọ bụla-shelf kwesịrị ekwesị maka ọrụ ahụ, ka Ash Light 'ọkachamara na-enyere gị aka inweta ngwaahịa gị dị mma n'ime ụbọchị asaa n'enweghị uru ịdọcha ahịa ma ọ bụ uru hazie. Usoro mmepụta: na-eji steeti teknụzụ na imewe na imewe na ngwaahịa na-eme ka ndị ahịa na-anata ngwaahịa kachasị ike dị.
1. Ajụjụ: Ndị ahịa na-ekwupụta ụdị ihe achọrọ, nkọwapụta arụmọrụ, usoro ndụ, na nnabata chọrọ.
2. Chepụta: Ndị otu imewe ahụ gụnyere site na mmalite nke ọrụ iji hụ na ngwaahịa kachasị mma ejikọtara na mkpa ndị ahịa.
Ndị ahịa na-emekọ ihe
Ngwaahịa ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa n'ọtụtụ ngwa na ụlọ ọrụ.
Mgbanye ngwa ngwa, ogologo ndụ ruo kilomita 120,000
Gasket zuru ezu.Ike corrosion iguzogide, nrụgide, okpomoku na nguzogide corrosion1d akpaaka akụkụ co., Ltd. Ụlọ ọrụ kachasị mma
Ajuju ajuju obula, pls degara anyị